Ajjechaan humnoota mootummaa Itoophiyaatiin Oromootarra gahaa jiru cimee itti fufeera – YEROOBLOG
Ajjechaan humnoota mootummaa Itoophiyaatiin Oromootarra gahaa jiru cimee itti fufeera
Yerooblog	Oromia &Ethiopia, Oromo Protests, Politics	 January 6, 2016 January 6, 2016 1 Minute
Suraa1: Horaa Bantii Suraa2: Reeffa Horaa Bantii gara bakka dhaloota isa Baddallee, Iluu Abbaabooritti yeroo ergamu (Madda Suraa: Feesbuukii Jaawaar)
Barataa Saayinsii nyaataa (Food Science) waggaa 4ffaa Yunvarsiitii Wallaggaa kan ta’e, Horaa Bantii, gaafa Amajjii 4/2016 humnoota mootummaan mooraa baraturraa qabamee fudahtamee ture. Bakka buuteensaas hinbeekamne ture. Garuu, ajjeefamee erga gatamee booda, guyyaa haraa’aa Amajjii 6/2016 reeffi isaa daggala keessatti gatamee argameera.
Reeffi isaa erga qorannoof gara Hospiitaala Naqamteetti ergamee booda, gara bakka dhaloota isaa, Baddallee, Iluu Abbaabooraatti ergameera. Maatiinsaa mucaan keenya baratee bor nugargaara jedhanii abdachaa turan reeffasaa simachuuf dirqamani.
Haala kanaan barattoonni Oromoo hedduun humnoota mootummaatiin ajjeefamanii maatii isaaniif ergamaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraayiin durfamu gaaffii barattoonnii fi uummanni Oromoo kaase deebisuu waan hinbarbaadneef namoota nageenyaan Maastar Pilaanii Finfinnee mormuuf ba’aan ajjeesuu, qaama hiri’isuu, daraaruu fi hidhuu irratti argama.
Haga yoonaa, odeeffannoo aktivistoota mirga dhala namaarraa argameen Oromoonni 130 ol akka du’aniiru. Namoonni dhibba hedduutti lakkaa’aman qaama isaanii akka dhaban godhamaniiru. Namoonni kuma kudhanii olta’an garaa mana hidhaatti guuramaniiru. Namoonni hedduun bakka buuteen isaanii hin beekamu. Kanneen, gidduu gala Qorannoo Yakkaa, Maakalaawwii, jedhamu seenaan akka malee daraaramaa akka jiran odeeffannoon nugahaa jiru ni mullisa. Hedduun isaanii maatii, firoottaniifi hirriyoota isaaniitiin akka hindaawwatamne dhorkamaniiru.
Mormiin Maastar Pilaanii Finfinnee barattoota sadarkaa tokkoffaa Ginciitiin gaafa Sadaasa 2/2015 jalqabame, gara kuutaalee Oromiyaa adda addaatti babala’atee amma ji’a lamaa oliif deemsifamaa jira. Mormiin baranaa kun Oromoon kaabaa kibbaa fi bahaa dhihaa tokkummaan kan irratti hirmaatedha. Mootummaan Itoophiyaa Adda Bilisa Baasaa Tigraayiin durfamu mormii uummata Oromoo hundaan irratti ka’e waan sodaateef humna fayyadamuun dhaabuu yaala jira.
Haata’u malee, Oromoonni mirga isaanii kabachiifachuuf yeroo kammiyuu caalaa wareegama qaalii kaffalluun mormii fi diddaa itti fufanii jiru. Mormiin uummata Oromoo haga gaaffiin isaanii deebii sirri ta’e argatutti kan duubatti deebi’u miti.
Maastar Pilaanii Finfinnee
Previous Post Fikadu Shumata Flees to Egypt
Next Post EU Call Emergency Meeting to Discuss current Situations in Ethiopia